Kitra - Olana anatin'ny FMF :: Mananontanona ny fahatapahan’ ny famatsiam-bolan’ny Fifa • AoRaha
Kitra – Olana anatin’ny FMF Mananontanona ny fahatapahan’ ny famatsiam-bolan’ny Fifa
Miharatsy endrika ny baolina kitra malagasy. Manambana ny hanapaka ireo famatsiam-bolany amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa). Ny fivakivakisana sy ny adilahy ao anatin’ny komity mpanatanteraka misy ankehitriny no isan’ ny antony voalohany amin’izany.
“Efa niteraka fihenan’ny famatsiam-bola ny savorovoro tany aloha saingy efa niverina tamin’ny laoniny izany tao ho ao. Izao indray miseho lany ny korontana sy tsy fifanarahantsaina amin’ireo mpikamban’ ny komity mpanatanteraka (CE-FMF) ka mety hiafara amin’ ny fahatapahan’ny famatsiambola izany”, hoy ny loharanom-baovao avy ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Miantraika avy hatrany amin’ireo tetikasan’ny federasiona io fahatapahan’ny fanampiana avy any amin’ny Fifa io. Isan’ireo voakasik’izany ny fifaninanam-pirenena sy ireo fivoahan’ny ekipam-pirenena malagasy ary ny karaman’ny mpanazatra nasionaly. “Miainga avy any amin’ny Fifa ny ampahan-karaman’i Nicolas Dupuis, izay mitentina 5 000 euros sy tapakilam-piaramanidina miisa iraika ambin’ny folo”, hoy ny avy ao amin’ny FMF.
Ho an’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, rehefa misy ny fandaniam-bola, dia tsy maintsy mandefa ireo tetibola ilaina hanatanterahana tetikasa izy ireo. Ny Fifa no manaiky na mandà an’ izany, arakaraka ny fanazavana ao anatin’ilay tetikasa. Isan’ireo tsy nahazoantsika famatsiam-bola, ohatra, ny fikasan’ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra lalaovina amina tora-pasika na ny “Beach Soccer” hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. “Tsy mety mamaly ny fangatahantsika ny Fifa”, hoy fotsiny ny loharanom-baovaon’ny FMF.
Tamin’ny tsy fifanarahana voalohany dia efa nisy ny tsipy teny avy tany amin’ny Fifa ny hanasoniavan’ireo mpikamban’ny CE-FMF ny fifanaranana hisian’ny firaisan-kina (Pacte de Responsabilité) saingy maro ireo nanda ny hanao izany. Mety hanakorontana zavatra maro eo amin’ ny tohin’ny fifaninanana iraisam-pirenena handraisan’i Madagasikara sy ny fifaninanana eto an-toerana ny tsy fitoviam-pijery sy savorovoro ao amin’ny FMF.
Fampitandremana ny governemanta :: Notebahin’ny Filoha ny fitavozavozan’ireo minisitra